‘Waligey maalintaas ayaan u aqoonsanaan doonaa inay tahay maalintii arooskeyga’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afkeygow Hiil Waayi Meysid
Ilhaan Ciise Maxamed, March 17, 2018
Waa Hooyo, Hadana Khasab Cunug Kudhashay oo Go’aanka Qalbi-jab ah Qaadatay
Afrikaan.so, December 24, 2019
Waa Maxay Nefroon ‘nephron?
Dhaqaalaha Japan oo mar kale hoos u dhacay
Xidigtii Geeska Afrika
Cabdixakiim-Tiyari Cabdillaahi Aaden, February 3, 2020
Waa Maxay Xayeysiis?
Hibo Ciise, June 19, 2016
‘Waligey maalintaas ayaan u aqoonsanaan doonaa inay tahay maalintii arooskeyga’
Afrikaan.so — July 23, 2020
Waxaan doonayaa 20 sano kaddib inaan dabaaldago…. Umana dabaaldagi doono coronavirus awgiis balse waxaan xusi doonaa go’aanka aan ku gaaray inaan nolosheyda inta ka harsan la qeybsado Reme.”
Ayokunle Sulaiman iyo gabadha uu guursanayay ee lagu magacaabo Reme Olotun waxay aad u sugayeen waqtiga uu arooskooda dhici doono. Xafladda guurkooda waxay ku qorsheysneyd inay 18-kii bishii April ka dhacdo hoteelka Sheraton ee ku yaalla magaalada Lagos, Nigeria.
Laakiin cudurka safmarka ah ayaa hor istaagay. Reme, oo ku nool kana shaqeysa waddanka Canada uma aysan suurtagalin inay Nigeria timaado si ay isu guursadaan iyada iyo Ayokunle.
“Musiibo weyn ayey igu noqotay arrintaas,” ayey tiri iyadoo la hadleysay BBC-da. “Horay ayaan usii iibsaday dharka arooska, kabaha iyo wax walba.”
Laakiin Ayokunle isaga dhankiisa, ma uusan ku fikireynin in marnaba uu arooskiisa dib u dhaco.
Sidaas darteed wuxuu ku fikiray hab arrintaas lagu socodsiin karo, xafladda arooskana ay ku qabsoomi karto.
Ugu dambeyntii, lamaanaha waxay isku afgarteen inay sameystaan munaasabad diini ah oo dhacday 18-kii April, taasoo uu hoggaaminayay baadari, kana dhacday aaladda muuqaalka ah ee Zoom.
“Xaaladdu waxay ka gudubtay murugo waxayna isu baddashay rajo iyo yididiilo wanaagsan,” ayey tidhi Reme.
Guurka dhinaca online-ka ma yahay sharci?
Dalka Nigeria sharci kama aha in online lagu sameeyo xafladda meherka iyo arooska..
Sharciga guurka ee waddanka u yaalla wuxuu dhigayaa in lamaaneyaashu ay kala doortaan laba arrimood oo kala ah inay isku guursadaan xafiiska dowladda ama goob diimeed oo dowladda ka diiwaan gashan.
Laakiin maadaama la mamnuucay in xafladaha la isugu imaado, Abisola Ogunbadejo, oo ah qareen waxay sheegtay in dad badan ay weydiinayeen sida loogu sharciyeyn karo inay xafladahooda u sameystaan qaab online ah.
Waxay sameysay muuqaal ay Youtube soo dhigtay, oo ay dadka talooyin ku siineyso.
Ms Ogunbadejo waxay sheegtay in iyada ay la saxan yihiin munaasabadaha aroosyada diiniga ah ee lagu qabto dhinaca online-ka.
Ayokunle iyo Reme waxay qorshahooda ka dhigeen in xafladda caadiga ahna ay sameystaan marka ay gabadha u suurtagasho inay soo safarto. Kaddibna waxay danacsan yihiin inay labadooduba Canada u guuraan.
Balse inta aan taas la gaarin ka hor, lammaanahan waxay dareemayaan inay go’aan sax ah qaateen.
Inkastoo aysan sharciga hortiisa isku guursanin, munaasabadda ay online-ka ku sameysteen waxay baddashay nooca uu xiriirkooda ahaa.
“Waligey maalintaas ayaan u aqoonsanaan doonaa inay tahay maalintii arooskeyga,” ayuu yiri Ayokunle.
“Waxay ila tahay in Reme ay tahay xaaskeyga, waxaana billaabay inaan ugu yeero xaaskeyga, taas ayaana muhiim ii ah.”
Reme lafteeda waxay sheegtay inaysan markii hore hubin xafladda dhinaca online-ka ku dhacday, laakiin Ayokunle ayaa sameeyay dadaal uu ugu qanciyay.
Jid ay kaligood raaceen.
Inta badan dadka reer Nigeria, guurka wuxuu la yahay wax aad u weyn. Qoysaska qaarkood waxay kumannaan doolar ku bixiyaan xafladaha iyo hadiyadaha aroosyada.
Balse Reme waxaa ku filan xafladda lagu sameeyay dhinaca online-ka.
“Waxaa la joogaa xilligii ugu habboonaa ee aan go’aanka ka gaari lahayn waxyaabaha noo khaaska ah ee aan dooneyno – dadka mar walba ma waayi doonaan wax ay sheegaan,” ayey tiri.
Tags: 'Waligey maalintaas ayaan u aqoonsanaan doonaa inay tahay maalintii arooskeyga'
Next post Lix arrimood ka ogoow shirka Dhuusamareeb.
Previous post Xagee Ayey ka Toosi La’dahay Doorashada Heer Qaran ee 2021?